Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-brand ye-Cosmetics yaseKorea iVella ngoku iYandisa eJapan
I-Vella yavula ivenkile yayo esemthethweni kweyona qonga inkulu ye-e-commerce yaseJapan 'Qoo10' kwaye yabhengeza ukuba izakuthengisa iimveliso zobuhle ezipholileyo, ezicocekileyo kunye neemveliso zayo eziphambili njengemveliso ye-vegan kubandakanya iVella Ultra Hydro Sun Essence.
I-Vella yi-brand yokuqala ye-skincare e-Korea ukuqalisa umgca wemveliso yokunakekelwa kwentamo kwaye uthengise ngaphezu kweemveliso ze-1 yezigidi, ukuseka isikhundla sayo eKorea.
Ngokuvula ngokusemthethweni, abathengi baseJapan banokuthenga iVella Ultra Hydro Sun Essence eQoo10. I-Vella Ultra Hydro Sun Essence yiNombolo ye-1 ye-sun essence kunye nemveliso yokunakekelwa kwelanga enokusetyenziswa unyaka wonke kwi-Wadiz.
Ukubhiyozela ukuvulwa kwevenkile esemthethweni, uVella unika isaphulelo se-20 ekhulwini kude kube nguNovemba 26 ngomcimbi omkhulu wesaphulelo kwi-Qoo10.
Ngeli xesha, iVella ethe yanda kwimarike yaseJapan iqala kweyona ndawo iphambili yokuthenga kwi-Intanethi yaseJapan iQoo10, yandisa ukufikelela kwayo kwihlabathi ngokungena kumaqonga ee-commerce aphambili anjengoShopee, elona qonga likhulu lezorhwebo kwi-Intanethi kuMzantsi-mpuma Asia, kunye neAmazon, eyona nkampani inkulu ye-e-commerce yehlabathi.